बिरेनुनको फाइदा ! - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
Home / दिव्य निरोग / बिरेनुनको फाइदा !
बिरेनुनको फाइदा !
शुभ बिहानी सँगै गिलासमा पानीमा बिरेनुन घोलेर खादा यस्ता दर्जन बढी फाईदै फाइदा … जानकारीको लागि सियर गरौ … आयुर्वेदका अनुसार बीरेनुनलाई आफ्नो आहारसँगै प्रयोग गर्नाले विभिन्न किसीमका रोगहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । यसले मधुमेह , उच्च रक्तचाप , पेटसम्बन्धि समस्याहरुबाट छुट्कारा दिलाउँछ । किनकी यसमा ८० प्रकारको खनिज पदार्थहरु पाईन्छ । विहान बीरेनुनलाई पानीमा मिसाएर खानुभयो भने, तपाईंको स्वास्थ्य निकै नै राम्रो हुन्छ ।